Mooyaaleen harka Oromootii bahaa jirtii? Kun tasumaa hin hayyamamu! - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMooyaaleen harka Oromootii bahaa jirtii? Kun tasumaa hin hayyamamu!
“Mooyyalee waan nama gaddisiisaa tokkotu jira. Taqaraa cuftinuu taphaa ya harkaa nu baate. Magaaliitti dizaayinaa haaran shalaashalamaa jiraachuun, muki dhaabamuun hojii dansaa jajjabeeffamuu qabu.
Duub waan argee warra finnaa gurra buusuuf arguu yaaluus hin milkoofne.
– Manni tokkochii keenna hedduu waliin bituuf wal madaalchisan;
* Mana akkamalee guddaa (min G+10), ballinni yoo diqqaate 2km2
* Lafa jalaan guddoo gad fagoofi gubbaan raadariin sasalphaa Kan lafaan #control godhan, ka beettaa waan fagoo quuqaa cufaa laalaniitti jira.
* Fulaan sun ammallee lafa Warqii toonii hedduu qabdu ta’uu isii waajjira Soomalii ka Mooyyalee ganda 02 cinaa Abrahaam hoteelii seenaa mirkaneeffadhaa!
##Qoollajjiin Soomaliin Mooyyaleetti ijaarte waggaa Kan ykn waggaa dhuftu damee Yuunibarsitii Jijjiggaa ta #Business_and_Economics, #Animal_sciencefi #Fayyaa namaa akka itti banuuf qophoofte karoorii xummurameeraa jedhu.
#Biiroo bishaan Oromiyaa kan magaalaa Mooyyalee akka Biiroo bulchiinsaafi buufata Poolisii Soomaliitti adda hirattu karoorfachuu isii icciitiin gola Layee taraafi bullaadii baate ni ifoomsiti.
#Gabayaa duraan karaa Booleetin ummanni keenna fayyadamaa ture, sirkaala Keeniyaati beessee kennuun gara #MeeggaaTaraa akka deebifte daayimtuun qulqullittiin beesharaa steeriitii suuqiii #Tawakal_shop jedhamutti qoosaa fakkaattee Garrichaa keessaa galdaatee ni mirkaneesaiti.
‘ Akkuma Boolee isaniitti cumneen karaa asphaaltii Caamuuqiitti cumnee gibiraan cuqqiisuu isan dhoorraa jedhee Garrichii gurbaa Abdulaakim jedhaniitti fokkore’ .
#Daawwaa zooniin idilaayee akka Federaalaatti beekkamtii argateera. Ummata Soomalii qofa adoo hin tayin sabaaf sablammiin hedduun mala jireennaa dhaachuuf waraqaa eenyummaa N-5 akka murachaa jiranittu mullata. Kuniin nu ganuuf osoo hin taanee akka hojiif itti tolutti kan gama lachuutuu (jechuun N-4fi 5) muratan fakkaatu yoo mala murru.
Eegaa akka walii galatti Mooyyalee ummata Oromoo harkaa ba’aa waan jirtuuf ummanni Oromoo dhimma Mooyyalee ummata Booranaa qofatti dhiisee bifa kanaan Kan itti fufu yoo taye, balbaltii Oromiyaa takkittiin akka cufamaa jirtu dagachuu hin qabu”
Raddaatiin Shufeerii dhiisee bu’eera. Warri haftanis daddafaa bu’aa:) 🤭
Akka Henok G. Gabisa jedhetti, poolisoonni yakka suukanneessaa har’aa sana raawwatan seeratti dhihaachuu qabu. Garuu:
1) Poolisoota sana sirna bulchiinsa of harkaa qabutu bobbaase. Kan gaafatamuu qabu sirna isaan aangomse ta’uu qaba.
2) Yakkoota hanga ammaatti dalagamaniif qaamni seeratti dhihaate hin jiru. Ammas hin dhihaatan. Sirnichi ergamtoota isaa ni kunuunsa malee hin adabu.
Dubbii kaadireen odeessitu kijiba jedha hiriyaa Abiyyii:)